Izvi ndizvo zvichaunzwa neApple kwatiri Muvhuro unotevera | Ndinobva mac
Yakafananidzwa | | Apple TV, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac Os X, Noticias, Rumo
Tangosarirwa nemazuva mashoma kubva Mharidzo nyowani yaApple uko akawanda matsva anotarisirwa asi kwete akawandisa matsva futi. Nhasi tinounganidza, uye isu tinoratidza zvishoma uye isu tinofungidzira izvo zvichave zvichapihwa nekambani yeCupertino kwatiri zvinotevera Muvhuro, March 21 kubva 18:00 pm Spanish peninsular nguva.
1.1 mana ma inchi iPhone
1.2 Nyowani 9,7-inch iPad
mana ma inchi iPhone
Uye isu tinoti ina-inch iPhone nekuti hapana munhu anonyatso kuziva kuti ichi chitsva Apple chimbozodaidzwe. Isu tese tinozvitora sezvisina basa kuti zita rake richava iPhone SE asi inogona zvakare kuve iPhone 6C, iPhone 5se ... Chokwadi ndechekuti ichi chishandiso chitsva, sekureva kwese runyerekupe, ichave ine ina-inch screen uye Kubata ID, ichabatanidza chipenga cheA9 chine M9 yekufambisa koprocessor, ichaunza 1GB ye RAM uye Ichazounzwa mumhando nhatu dzakarongedzwa zvinoenderana nekwaniso yavo 16, 64, uye 128 GB; Ichabatanawo, inofungidzirwa, chipfuti cheNFC chinoita kuti chienderane neApple Pay, uye Bluetooth 4.2. Ichavewo nebhatiri rakati kurei, pane kutaura kwe1624 mA.
Kana iri kupera kwayo, inotarisirwa kuve yesimbi. Wakaonekana nepurasitiki yeiyo iPhone 5c. Chidzitiro chaigona kuve chakatenderedza micheto, senge muPhones 6 uye 6 pamwe, asi dhizaini yacho ichiri kusahadzika, zvinoita sekunge inogona kunge yakafanana neiyo iPhone 5s pane iyo iPhone 6.
Nyowani 9,7-inch iPad
Zvekare isu tinotaura nezve iyo nyowani iPad uye isu hatitaure nezve iyo iPad Air 3 kana iyo iPad Pro, kunyangwe dzinenge runyerekupe rwunoratidza kuti izvo zvatichaona ndizvo kadiki iPad Pro. Zvinotaridza kuti kubva izvozvi iPad ichazotsanangurwa seMacBook Pro, nekuda kwehukuru hwayo skrini.
Kana zviri zvitsva, vashoma vachawedzera 3D Kubata tekinoroji uye ichave inowirirana neApple Penzura, inogona zvakare kuisa iyo Smart Connector saka yaizoperekedzwa neiyo diki Smart Khibhodi uye yaizovewo neayo maviri masipika pamusoro, senge iPad Pro, ine yakazara ina.
Dhizaini yayo yekunze yaizo fanana neiyo iPad Mhepo uye iPad Pro.Isuwo hatitarisiri kuona nhau maererano nekugadziriswa kwescreen kana kugadzirisa bhatiri. Zvinocherechedzwa kuti iyo nyowani 9,7-inch iPad kana iPad Pro inogona kuisa Flash mune huru yekumashure kamera, chimwe chinhu chatisina kunyatsonzwisisa asi chakatora muviri wakawanda mumwedzi yapfuura.
apuro haizounze iyo Apple Watch 2, icho chinhu icho isu chatinofanirwa kufunga tese, chiri munguva pfupi iri kutevera, asi hongu tichaona kana taigona kuona zvimwe mhando nyowani dzemabhanhire kana mabhendi. Pamwe mavara matsva eSport Band uye kumwe kushamwaridzana kutsva kwerudzi rweHermes kwataigona kutoona mwedzi mishoma yapfuura.
Uye zvese izvi maererano ne Hardware, asi chokwadi ndechekuti nemusi weMuvhuro tichaendawo kunoratidzwa kuvandudzwa kukuru kweese Apple mobile uye desktop masisitimu anoshanda.
Iyo nyowani yekushandisa sisitimu yakagadzirirwa iyo Chizvarwa chechina Apple TV Ichabatanidza rutsigiro rwekubatanidza maBluetooth kiyibhodhi uye zvakare inobvumidza kuisa zvikumbiro mumafolda pachikona chikuru, sezvataona mumidziyo yeIOS kwemakore Uye zvakare, iyo App Switcher interface ichavandudzwa, uye ichasanganisira rutsigiro rweICloud pikicha raibhurari uye Hupenyu Mapikicha.
tvOS 9.2 Iyo zvakare inosvitsa MapsKit, iyo inobvumidza vanogadzira kuti vadzike mamepu mune avo mashandisiro. Uye wedzera Siri rutsigiro rwemitauro yakawanda.
Kana tichigadzirisa yedu Apple TV 4 kune iyo nyowani yekushandisa system, isu tinozokumbirwa kumisikidza kana kudzima kuraira. Icho chimwe chitsva, kuraira, uko vashandisi vanogona kuraira zvinyorwa uye kuperetera mazita evashandisi uye mapassword pane kuataipa.
Nhau dzichangoburwa ndedzekuti neTVOS 9.2 pane iyo nyowani Apple TV 4, Siri anozogona kutsvaga zvekushandisa muApp Store, zvinozoita kuti zvive nyore kwatiri kuti titsvage mitambo mitsva, kunyorera, nezvimwe.
iOS 9.3 ndiyo yechitatu hombe kuvandudzwa kwe iOS 9 iyo yakaburitswa munaGunyana wapfuura. Its noveltyies inosanganisira kuiswa kwehusiku modhi, mukana wekudzivirira manotsi nepassword, pamwe nezviito zvitsva zvinokurumidza zveiyo 3D Kubata kweiyo iPhone 6s uye 6s plus uye chirongwa chedzidzo chePadad chine rutsigiro rwemushandisi-yakawanda chichavandudzwa.
Muvhuro unotevera, Apple ichaunzawo yazvino gadziriso kuApple Watch inoshanda sisitimu, iyo inobvumidza, pamwechete neIOS 9.3, kubatanidza mawadhi akati wandei neiyo imwe iPhone. Isu tiri pakupedzisira kuzokwanisa kuvatenga nehuremu!
Iyo mepu interface paApple Watch ichagadziridzwa zvakare nemabhatani matsva ekukurumidza kuwana kumba uye kero dzekushanda.
Hapana imwe shanduko yakaonekwa muWatchOS 2.2, zvazvichasanganisira zvichave zvakawanda kugadzirisa bug uye kugadzirisa kugadzikana.
Chekupedzisira, uye kana pasina zvimwe zvinoshamisira, Apple ichaunza zvakare kuvandudzwa kweOS X 10.11.4 El Capitan iyo inosanganisira akati wandei maficha maficha senge kutsigirwa kwepassword yakachengetedzwa manotsi mukushandisa Notes kubva kuIOS 9.3 zvakadaro, ichatarisa pane kugadzirisa mashandiro uye madiki bug fixes akaonekwa kusvika ikozvino.
Hatisi kuzoona chero shanduko dzekunze.
Uye izvi ndizvo zvese zvatinoziva kusvika zvino. Kunze kwekunge Apple ichida kutishamisa nechimwe chinhu chitsva, hatizoone chero chinhu nyowani, hatizoone chero chinhu chatisingatarisiri, saka Keynote Muvhuro unotevera hauzove chinhu chinongova chiito chakareruka chatichakuchengeta zvakakodzera kuziviswa. mukati memanheru-husiku hweMuvhuro unotevera, Kurume 21 kuApplelizados uyezve, usarasikirwa nepodcast yakakosha iyo yatichaburitsa husiku ihwohwo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Izvi ndizvo zvichaunzwa naApple kwatiri Muvhuro unotevera
Mark Tohom akadaro
Kwandiri, ndiani asinganyatso kuziva nezveApple, zvese zvandakaverenga muchinyorwa zvinoita kunge zvitsva.
Pindura Marco Tohom
Zvimwe zvinoratidza nezve kukokwa kwekukoka kweApple